Amina, Zazzau ၏အာဖရိကန် Warrior ဘုရင်မ
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု အရေးကြီးကိန်းဂဏန်းများ
Amina, Zazzau ဘုရင်မ
by Jones ဂျွန်ဆင် Lewis က
အာဖရိက Warrior ဘုရင်မ
သူမ၏လူမျိုး၏နယ်မြေတိုးချဲ့, စစ်သည်တော်မိဖုရား for: လူသိများ။ သူမ၏အကြောင်းကိုပုံပြင်များဒဏ္ဍာရီဖြစ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ပညာရှင်များသူမကယခုနိုင်ဂျီးရီးယား၏ Zaria ပြည်နယ်သည်အဘယ်အရာအတွက်အုပ်ချုပ်သူအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ရက်စွဲများ: အကြောင်းကို 1533 - အကြောင်းကို 1600
အလုပ်အကိုင်: Zazzau ဘုရင်မ
Amina Zazzau, Zazzau ၏မင်းသမီးလေး: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
ခံတွင်းအစဉ်အလာ Zazzau ၏ Amina အကြောင်းကိုအများအပြားပုံပြင်များပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ပညာရှင်များယေဘုယျအားပုံပြင်များယခုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် Zaria ပြည်နယ်ဖြစ်သည့် Zazzau အုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးတစ်ဥစာမြို့-ပြည်နယ်အပေါ်အခြေခံသည်ဟုလက်ခံပါ။
Amina ရဲ့ဘဝနှင့်စည်းမျဉ်း၏ရက်စွဲများပညာရှင်များအကြားအငြင်းပွားမှု၌ရှိကြ၏။ တချို့က 15 ရာစုအတွင်းသူမ၏နေရာနှင့် 16 အတွက်အခြို့သော။ Muhammed Bello အစောပိုင်းကရင်းမြစ်များမှ 19 ရာစု၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တစ်ဦးသမိုင်း, ထဲမှာသူမ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုချပြီး, အပြင်သူမ၏ဖျောပွထားသ, 1836. အဆိုပါ Kano Chronicle မှစတငျရသော Ifaq Al-Maysur အတွက်သူမ၏အောင်မြင်မှုများ၏ရေးသားခဲ့သည်သည်အထိသူမ၏ဇာတ်လမ်းအရေးအသားထဲမှာပေါ်လာပါဘူး 1400 ။ အုပျ Bakwa Turunka ရှိပုံပေါ်သော်လည်းသူမသည်, Amina ရဲ့အမေ 19 ရာစုအတွက်ပါးစပ်သမိုင်းအနေဖြင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားသောမင်းတို့ရဲ့စာရင်းထဲတွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့, စောစော 20th ထုတ်ဝေမပေးပါ။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Amina သစ္စာဝါဒီသို့မဟုတ်ရိုးသားဆိုလိုသည်။
အဘိုး: Zazzau ၏ဖြစ်ကောင်းအုပ်စိုးသောမင်းကို
မိခင်: Turunka ၏ Bakwa, Zazzau ၏အာဏာရမိဖုရား
အစ်ကို: Karama (ဘုရင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်, 1566-1576)
အစ်မ: Zariya, Zaria ၏မြို့အမည်ဖြင့်မှည့စေခြင်းငှါအဘယ်သူကိုများအတွက်
Amina, Zazzau ဘုရင်မအကြောင်း
Amina ရဲ့မိခင် Turunka ၏ Bakwa တစ်နိုငျငံတျောသညျ, ကုန်သွယ်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အများအပြားဟာဥမြို့-နိုင်ငံတို့၏တဦးတည်း Zazzauas ၏တည်ထောင်သူအုပ်စိုးသောမင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Songhai အင်ပါယာ၏ပြိုကျ, ဤမြို့-ပြည်နယ်များနှငျ့ပွညျ့တနျခိုးတျောထဲမှာကွာဟချက်ထားခဲ့တယ်။
Zazzau ၏မြို့တွင်မွေးဖွား Amina, အစိုးရနှင့်စစ်တပ်စစ်ဆင်ရေး၏ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားနှင့်သူမ၏အစ်ကို, Karama နှင့်အတူတိုက်ပွဲများတိုက်ခိုက်ခဲ့ခဲ့သည်။
Bakwa သေဆုံးသောအခါ 1566, တွင်, Amina ၏ညီဖြစ်သူ Karama နန်းထိုင်၏။ Karama သေဆုံးသောအခါ 1576 ခုနှစ်တွင် Amina ယခုအကြောင်းကို 43, Zazzau ဘုရင်မဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူမသည်တောင်ဘက်အတွက်နိုင်ဂျာ၏နှုတ်မှ Zazzau များ၏နယ်မြေချဲ့ထွင်ရန်သူမ၏စစ်ရေးစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြောက်ဘက်တွင် Kano နှင့် Katsina အပါအဝငျ။ ဤရွေ့ကားစစ်ရေးအောင်ပွဲတွေသူတို့ကပိုကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သိမ်းပိုက်နယ်မြေများအခွန်ဆက်ပေးဆောင်ခဲ့သောကြောင့်, နှစ်ဦးစလုံးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်များစွာသောစည်းစိမ်ဥစ္စာမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
သူမသည်သူမ၏စစ်ရေးလုပ်ငန်းများစဉ်အတွင်းသူမ၏စခန်းများပတ်ပတ်လည်နံရံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Zaria ၏မြို့ပတ်ပတ်လည်နံရံတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ မြို့ကြီးများတဝိုက်ရွှံ့နံရံများအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည် "Amina ရဲ့နံရံများ။ "
Amina လည်းသူမကအုပ်ချုပ်ထိုဒေသတွင် kola အခွံမာသီးများစိုက်ပျိုးခြင်းစတင်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းအင်္ဂလန်ဘုရင်မအဲလစ်ဇဘက်ငါတုပ - - သူမလက်ထပ်ဘယ်တော့မှနေချိန်မှာနှင့်မျှမကလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်, နံနက်ယံ၌သူ့ကိုသတ်ဖြတ်, ထို့နောက်တစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ပြီးနောက်သူမ၏ဆည်းပူးနေ၏ရန်သူအထဲမှတစ်ဦးသည်လူကိုပြောပြလည်းသူနှင့်အတူညဉ့်ကိုဖြုန်း legends ဒါကြောင့်သူကမျှမပုံပြင်များပြောပြနိုင်ဘူး။
Amina သူမ၏မသေဆုံးခင် 34 နှစ်ကြာအုပ်စိုးခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရသူမ Bida, နိုင်ဂျီးရီးယားအနီးရှိစစ်တပ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
ဂို့ပြည်နယ်, အမျိုးသားဝိဇ္ဇာပြဇာတ်ရုံမှာ Amina တစ်ရုပ်ထုလည်းမရှိ။ အတော်များများကကျောင်းများသူ့အဘို့အမည်ရှိနေကြသည်။
သင်က Susan B. Anthony အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
စာရာမင်းသမီး Emma Edmond (ဖရန့် Thompson က)
Amelia Earhart ကို Quotes
မင်းသမီး Emma Goldman
ရလဒ်ပြသမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကိုဘယ်လို align လုပ်ဖို့နဲ့ Realigning လုပ်ဆောင်ချက်များ Are
ပွငျသစျထဲတွင် (ချေးငွေမှ) "Prêter" Conjugate ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
အဆိုပါ Manson မိသားစု၏လျှပ်တစ်ပြက်
အရှေ့တီမော (အရှေ့တီမော) | အချက်အလက်နဲ့သမိုင်း
JavaFX: GridPane ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်အတွက်ဖမ်းမိထိုမိနျးမ - ကျမ်းစာပုံပြင်အကျဉ်းချုပ်
သီးသန့်: ပတေရုသ Rubin က "သံမဏိ၏က Man" Shield ကိုဒီဇိုင်နာနှင့်အတူမေးမြန်းချက်
Z ကိုမှတစ်ဦး မှစ. ဂရိတ်မွတ်စလင်ကလေးမိန်းကလေးအမည်များ၏စာရင်း
'' Turn စေရန် 'အတွက်ကြိယာ
Sikhism Tattoos Allowed ပါသလား?
တစ်ဦး Hillfort ကဘာလဲ? အားလုံးသံခေတ်ဥရောပတိုက်တွင်ရှေးခံတပ်အကြောင်း
အဆိုပါတစ်ဒိုင်ယာရီ Keeping ၏တန်ဖိုး, ဂျာနယ်, ဒါမှမဟုတ်စာရေးဆရာရဲ့ Notebook
ကမ္ဘာ့ဖလားခန့်နွေဦး Equinox ပွဲနေ့များ
Proxima Centauri နှင့်၎င်း၏ကျောက် Planet ကို: အအိမ်နီးချင်းတွေ့ဆုံရန်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထိပ်တန်း 10 ဦးအမိုးခုံး
ဝေဖန်အတွေးအခေါ်ကဘာလဲ? - ပွင့်လင်းစိတ်
အဘယ်သူသည် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပုံစံ၏နေ့ရက်များ" ပေါ်တွင်အဆိုပါ Horton ကမိသားစုသစ်ပင် Up ကိုကို?
CMA ဂီတပွဲတော်မှာတက်ရောက်သည်ထိပ်တန်း 10 သိကောင်းစရာများ